बिष्णु माझीसंग पहिलो दोहोरी खेलेका गायक कुशलले खोले बिष्णु माझी १० बर्षसम्म मिडियामा नदेखिनुको कारण यस्तो,…. (भिडियोसहित) – News Nepali Dainik
बिष्णु माझीसंग पहिलो दोहोरी खेलेका गायक कुशलले खोले बिष्णु माझी १० बर्षसम्म मिडियामा नदेखिनुको कारण यस्तो,…. (भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २५, २०७७ समय: २०:२६:१५
चर्चित लोक गायिका विष्णु माझि र उनको खुल्न नसेकेका जिन्दगीका पानाहरुको खोजी धेरै पहिलादेखि नै भई रहेको छ । सुरिलो स्वरकी धनी विष्णु माझिको एक झल्को पाउन विगतदेखि वर्तमानसम्मै उनका दर्शकहरु आतुर छन् । विष्णु माझिलाई नजिकबाट उनका दर्शक श्रोताले नियाल्न चाही रहेका छन् । तर उनी चर्चित हुँदाहुँदै पनि आजसम्म पनि सबैकालागी एउटा रहस्यको गायिका बनिरहेकी छन् ।
उनको एक झल्को पाउनकोलागी र उनीसंगै फोटो खिचाउनकोलागी उनका सहकर्मीदेखि उनका फ्यानहरुको सपना आजको यो समयमा पनि अधुरो नै भईरहेको छ । लोकगीत संगीतको क्षेत्रमा उनी एउटा यस्तो गायिका बनिन् जस्को नाम र जिन्दगीका सबै कहानी रहस्यमय बनेको छ । पुरै गुगलमै खोजी गर्ने हो भने गायिका विण्णु माझिको केवल एउटै फोटो पाउन सकिन्छ । जस्मा उनले आकाशी रंगको साडी लगाएकी भने कालो रंगको माला आफ्नो घाँटीमा सजाएकी छन् ।
सबैकालागी चासो र खोजी विषय बनिरहेकी लोकगायिका विष्णु माझिलाई भने केही औंलामा गन्न सकिने कलाकारहरुलेसंगै गीत गाएको बताए तापनि उनीहरुपनि विष्णु माझिको अनुहार हेर्न नपाएको बताउँछन् । फोटो खिच्नु त धेरै परको कुरा हो । कतिले त विष्णु माझिलाई उनकै श्रीमान सुन्दर मणीले नै बन्दी बनाएर राखेको टिप्पणी समेत गरिरहेका छन् । गीत रेर्कडकोलागी विष्णु माझिलाई सुन्दरमणीले आफुसंगै लिएर जाने र कुनैपनि कलकारसंग फोटो खिच्नै नदिने पनि बताएका छन् ।
यसका बाबजुद पनि विष्णुसंग गीत भने उनका सहकर्मीले गाउनछन् नै । विष्णुसंग गीत गाउने मध्यका अर्का कलाकार हुन् लोक गायक कुशल बेलवाशेले । उनले पनि विष्णु माझिसंग आफुले झण्डै डेढ दशक अघि गीत गाएको बताएका छन् । त्यो समयमा पनि विष्णु माझिको अनुहार हेर्ने आफुले नपाएको कुरा उनी बताउँछन् । उनले गायिका विष्णुको श्रीमान सुन्दरमणी उनीसंगै हिंड्ने हुनाले विष्णुसंग फ्राक्ंिल सम्बन्ध बनाउन नपाएको उनी बताउँछन् । भिडियोसहित
Last Updated on: February 7th, 2021 at 8:29 pm